Maamulka Gobolka Banaadir oo War kasoo saaray dilka Guddoomiyihii Deg. Hodan – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Maamulka Gobolka Banaadir oo War kasoo saaray dilka Guddoomiyihii Deg. Hodan
Guddoomiyaha Gobolka Banaadir Ahna Duqa Muqdisho ayaa waxaa uu faray dhamaan Hey’addaha Amaanka ee Gobolka Banaadir in baaris rasmi ah lagu sameeyo dhacdadaasi si loo helo cadaalad, la iskulana xisaabtamo Mas’uuliyadda shaqaaqada uu ku geeriyooday Allaha u Naxristo Marxuum Cabdixakiim Cabdiraxmaan Ciise (Dhaga-juun).
Allaha u naxariistee Guddoomiye Dhaga-juun ayaa gelinkii dambe er shalay kusoo laabtay Magaalada Muqdisho, isagoo ka yimid dalka Turkiga oo howlo Caafimaad u jiray, kadib markii qarax ka dhacay Magaalada Muqdisho uu dhaawac Culus kasoo gaaray.
Duqeymo khasaare loogu geystey Al-shabab oo ka dhacay Jubbooyinka iyo Amiir lagu dilay